Rajada Maka, World Church of God Switzerland (WKG)
Injiilka Luukos, nin indha la 'ayaa ku qaylinaya hareeraha isaga. Wuxuu doonayaa inuu soo jiito dareenka Ciise oo uu la kulmo barakeysan. Wadada Yerixoo, Bartimayos Indhoole oo ahaa wiilkii Timayos, ayaa ku fadhiyey wadada dhinaceeda. Wuxuu ka mid ahaa qaar badan oo rajo ka qabay inay kasbadaan noloshooda. Waxay ku tiirsanaayeen deeqsinimada dadka kale. Waxaan qiyaasayaa in inteena badan aan awood u lahayn inaan nafteena gelin karno xaaladdan si aan runtii u fahamno sida ay ahayd Bartimayos oo aan weydiisano kibis si aan uga badbaado?
Ciise wuxuu dhex maray Yerixoo iyo xertiisii ​​iyo dadkiisii ​​badnaa. “Bartimayos markay maqleen, wuxuu baaray waxaas waxay ahaayeen. Waxay u sheegeen in Ciisihii Reer Naasared ag maray. Markaasuu qayliyey isagoo leh, Ciise, ina Daa'uudow, ii naxariiso! (laga bilaabo Luukos 18,36-38). Markiiba wuu fahmay inuu Ciise yahay Masiixa. Tusmada sheekada ayaa ah mid cajiib ah. Ninkii wuxuu sugayey in wax dhacaan. Wuxuu ahaa nin indha la 'oo waxba ma uusan qaban karin inuu xaaladdiisa beddelo. Markuu Ciise ka gudbay magaaladiisii, ninkii indhaha la'aa ayaa isla markiiba aqoonsaday inuu yahay Masiixa (Rasuulkii Eebbe) oo daweyn kara indhahiisa. Sidaas daraaddeed cod weyn buu ku qayliyey inuu u fiirsado dhibaatadiisa, sidaa daraadeed dadkii badnaa oo ku yidhi isaga, Aamus oo aamus. Laakiin iska caabintii ayaa ninkii ku adkaysatay codsigiisii. Markaasaa Ciise joogsaday oo wuxuu ku yidhi, Halkan ugu yeedh! Markaasay ninkii indhaha la'aa u yeedheen oo ku yidhaahdeen, Kalsoonow, kac. Wuu kuu yeedhay! Markaasuu dharkiisii ​​iska tuuray oo booday oo u yimid Ciise. Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Maxaad doonaysaa inaan kuu sameeyo? Indhoolihii baa ku yidhi: Rabbuni (sayidkayga) waan arki doonaa. Markaasaa Ciise ku yidhi, Soco, rumaysadkaaga ayaa ku caawiyey. Kolkiiba ayuu wax arkay, oo jidka buu la qaaday isaga, (Mark 10,49-52).
Miyaad la mid noqon kartaa isla Bartimayos? Ma garwaaqsan tahay inaadan kaligaaga ku qaban karin si aad si dhab ah wax u aragto, waxaad u baahan tahay caawimaad? Waxaa laga yaabaa inaad maqasho farriinta dadka kale "Is-deji - Ciise aad buu ugu mashquulsan yahay inuu kula macaamilo" Farriinta iyo falcelinta xerta iyo xerta Ciise waa inay noqotaa: "Xabaquuq, kac oo kac, isagu waa kuu yeedhayaa! adigu isaga! »
Waxaad heshay nolosha dhabta ah ee aad raadineysay, "Ciise, sayidkaaga!" Ciise kaliya ma siinayo Bartimayos Indhoole, laakiin sidoo kale nimco iyo naxariis baa kuu jirta. Wuxuu maqlaa qayladaada wuxuuna ku siinayaa aragtida cusub si aad u fahamto qofka aad tahay.
Bartimayos waa tusaale wanaagsan oo guuleystaha ah. Waxa uu gartay itaal darridiisa, wuxuu isku halleeyey ciise inuu yahay kan siin kara nimcada Ilaah, wuxuuna raacay xer sida ugu dhakhsaha badan ee uu si muuqata u arki karo.